Xasan Cali Kheyre oo Safarkiisii Ugu Horreeyay Ku Tagay Wadanka Qadar.
Saturday May 13, 2017 - 19:30:34 in Wararka by Super Admin
R/wasaaraha dowladda Federaalka Xasan Cali Kheyrre ayaa safarkiisi ugu horreeyay ugu amba baxay dalka Qadar oo kamid ah dowladaha Khaliijka carabta.
Saraakiisha xafiiska warfaafinta Xafiiska Kheyrre ayaa warbaahinta u sheegay in socdaalka R/wasaaraha uu salka ku haayo shir caalami ah oo uu uga qeyb geli doono shir ka dhacaya magaalada Dooxa ee xarunta wadanka Qadar.
Dowladda Qadar oo isbaheysi la ah Mareykanka kuna caawisa ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada ayaa saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya iyadoo taageero maaliyadeed siisa dowladaha ciidamadoodu duullaanka kusoo qaadeen dalka Soomaaliya.
Hoggaamiyaha DF-ka ayaa 7 safar oo dibadda ah tan iyo markii uu xilka madaxweyne qabtay bishii 2-aad ee sanaddan 2017, safarada madaxda Dowladda Federaalka ku aadaan dibadda waxaa ku baxa lacago malaayiin dollar ah.
Col.Xasan Kheyre Xuseen Oo isku Dhiibay Wilaayada islaamiga Jubbooyinka.
Kudhowaad 40 Ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday wadanka Barma.